China Umatshini wokucoca ulwelo mveliso kunye nabathengisi | Xuanyi
Izinto eziluncedo zenkqubo yokunyibilikisa umgubo
1, uninzi lwesinyithi esinyibilikayo kunye nezinto zazo, iialloys zobuxoki, izinto ezinokungena zinokuveliswa kuphela ngumgubo wokunyibilikisa isinyithi.
2, kuba indlela yokunyibilikisa umgubo ingacinezelwa kubungakanani bokugqibela bokuxinana, ngaphandle okanye kancinci kwesidingo sokulungiswa koomatshini, inokusindisa kakhulu isinyithi, ukunciphisa iindleko zemveliso. Ukulahleka kwesinyithi ekwenziweni kweemveliso ngesinyithi somgubo Le ndlela yi-1-5% kuphela, ngelixa ilahleko yesinyithi ekwenziweni kweemveliso ngendlela eqhelekileyo yokuphosa inokuba phezulu njenge-80%.
I-3, kuba inkqubo yokunyibilikisa umgubo kwinkqubo yokuvelisa ayinyibilikisi, ayoyiki ukuxubana nobumdaka obuziswe yi-crucible kunye ne-deoxidizer, kwaye ukuntywila kuqhutywa kwindawo yokuphelisa kunye nokunciphisa umoya, ungoyiki igcwala , Kwaye ayiyi kunika naluphi na ungcoliseko kwizinto eziphathekayo, kunokwenzeka ukuba wenze izinto zokucoceka okuphezulu.
I-4, indlela yokunyibilikisa umgubo inokuqinisekisa ukuchaneka kunye nokufana komlinganiso wezinto ezibonakalayo. 5, umgubo wentsimbi ulungele imveliso yobume obufanayo kunye nenani elikhulu leemveliso, ngakumbi izixhobo kunye nezinye iindleko zokuqhubekeka kweemveliso, kunye nomgubo wokunyibilikisa umgubo imveliso kunganciphisa kakhulu iindleko zemveliso.
Inkqubo esisiseko yenkqubo yokunyibilikisa umgubo zezi
I-1, ukulungiswa komgubo okrwada. Iindlela ezikhoyo zokwahlulahlula zingahlulwa ngokwamacandelo amabini: oomatshini kunye nefiziksi. Indlela yoomatshini inokwahlulwa-hlulwa: indlela yokutyunyuzwa koomatshini kunye nendlela yokwenziwa kweatomization; iindlela zomzimba kunye neekhemikhali zahlulwe zangumngxunya we-electrochemical corrosion Indlela, ukunciphisa indlela, indlela yamachiza, ukunciphisa imichiza, indlela yokuhambisa umphunga, indlela yokuhambisa ulwelo kunye nendlela ye-electrolysis. Ezona ndlela zisetyenziswa kakhulu kukunciphisa, iatomization kunye neelectrolysis.
2.Umgubo wokwenza ubume obunqwenelekayo bebhlokhi engenanto.Injongo yokubumba kukwenza ubume obuthile kunye nobukhulu be-compact, kwaye ubenze babenobungqingqwa obuthile kunye namandla. uxinzelelo, uxinzelelo, uxinzelelo, uxinzelelo, uxinzelelo
Ukucoca i-billet.Sintering yinkqubo ephambili kwipowusta yokunyibilikisa isinyithi. Iipropathi zokugqibela zomzimba kunye nezomatshini zifunyanwa ngokuntywila kungenanto ihlanganisiweyo emva kokwenza.Sintering yahlulwe yintsimbi yokuhluza kunye namacandelo amaninzi. Indawo yokunyibilikisa isinyithi kunye ne-alloy esetyenziselwa ukumiliselwa kwesigaba esiqinileyo kwenkqubo yeyunithi kunye nenkqubo yamacandelo amaninzi.Ukunyibilikisa isigaba solwelo lwenkqubo yamacandelo amaninzi, ubushushu bokuntywila buphantsi ngokubanzi kunendawo yokunyibilika yecandelo lokuphamba, kodwa iphezulu kunendawo yokunyibilika yecandelo le-fusible.Ukongeza kwisintsi esiqhelekileyo, kukho ukuntywila okunganyibilikiyo, indlela yokunyibilika, indlela yokucinezela eshushu kunye nezinye iinkqubo ezikhethekileyo zokuntywila.
Ukulungiswa kokulandelelana kweemveliso.Unyango emva kokuntywila lunokwamkelwa ngeendlela ngeendlela ngokweemfuno ezahlukeneyo zemveliso.Ukugqiba, ukuntywiliselwa, ukutyabeka, unyango lobushushu kunye nokwenza electroplating.Ukongeza, kule minyaka idlulileyo, Ezinye iinkqubo ezintsha ezinjengokuqengqeleka kunye nokuqiniswa ziye zasetyenziswa ekusetyenzisweni kwezinto zomgubo wokunyibilikisa isinyithi emva kokuntywila, kwaye kufezekiswe iziphumo ezingcono.
Izinto zentsimbi yokunyibilikisa isinyithi kunye neemveliso kwicala lophuhliso lwexesha elizayo
1, ummeli wentsimbi esekwe kwisinyithi, iya kuba ngumthamo omkhulu weemveliso ezichanekileyo, umgangatho ophezulu wophuhliso lwamalungu.
2.Ukuvelisa ingxubevange yokusebenza okuphezulu kunye nesakhelo esifanayo, ukulungiswa okunzima kunye nokuxinana okupheleleyo.
3. Iialloys ezizodwa, ezibandakanya ngokubanzi izigaba ezixubeneyo, zenziwa yinkqubo yokuxinana eyandisiweyo.
4, ukuvelisa izinto ezingafaniyo, i-amorphous, i-microcrystalline okanye i-alloy metastable.
5, kulungiswa ifom eyahlukileyo nengafaniyo ngokubanzi okanye ukwenziwa kwamalungu adityanisiweyo.
I-6, ukuchaneka kokuhanjiswa kwezinto. Inkqubo yendlela yokunyibilikisa isinyithi inokuqinisekisa ukuchaneka kunye nokufana kobume bezinto kwindawo leyo.
Egqithileyo Izixhobo Isixhobo samandla
Okulandelayo: Powder yokunyibilikisa isinyithi Stainless